Xildhibaano barlamaanka DFS ka tirsan oo ugu baqay dowlada joojinta faragalinta konfur galbeed – Radio Daljir
Noofember 9, 2018 3:05 g 0
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay faraha kala baxdo arrimaha doorashada Koonfur Galbeed.
Shir ay Xildhibaanada iuo qeybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed ku yeesheen Baydhabo ayaa looga hadlay sidii doorasho xalaal ah oo navdoon uga dhici lahayd magaalada Baydhabo.
Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in go’aanka doorashada haddii dib loo dhigayo iyo haddii kale looga dambeeyo cida ay quseyso.
Wuxuu sheegay in dowladda Federaalka aysan mudeyn karin waqtiga doorashada ay dhici doonto isla markaana haddii ay mudeyo ay xadgudub noqoneyso.
Xildhibaano kale ayaa sidoo kale ugu baaqqy dowladda Federaalka inay faraha kala baxdo arrimaha Koonfur Galbeed isla markaana dregaanka loo madax banaaneeyo masiirkooda.
Dowladda Federaalka ayaa lagu eedeeyay inay faragelin ku heyso doorashada Koofur Galbeed, ayna taageereyso Musharaxiin gaar ah, oo ay dhaqaale iyo gaadiidka aan xabadaha karin soo siisay.
Musharax Jebiye oo kulan ballaaran la qaatey Bulshada Gaalkacyo (Sawiro)